XOG XASAASI AH:Yaa ka danbeeyay in Ra’iisal wasaare loo magacaabo Xasan Kheyre? - Hablaha Media Network
XOG XASAASI AH:Yaa ka danbeeyay in Ra’iisal wasaare loo magacaabo Xasan Kheyre?
HMN:- Faafhaahin ayaa ka soo baxeysa magacaabidda Ra’iisal wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo maanta xilkaasi u soo xushay madaxweyne Maxamed C/llaahi Farmaajo.
RIIX HALKAN OO DAWO MUUQAALKAN.
Ninka labaad ee arrintan ka danbeeya ayaa la sheegay inuu yahay gacan-yaraha Madaxweyne Farmaajo ninka lagu magacaabo Fahad Yaasiin oo si weyn uga hor yimid in shaqsi kasoo jeeda beelaha Abgaal ama H/Gidir loo magacaabo xilka Ra’iisal wasaaraha.
C/naasir Cabdull Maxamed iyo Axmed Macalin Fiqi oo olole weyn ugu jiray xilkan ayaa ku fashilmay iyagoo taageerayaashooda ka wadaagay in xilkaasi uu dhinacooda u dhacayo, ayna hubaan balanqaadka Farmaajo.
Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed ayaa Farmaajo kula taliyay inuusan xilka Ra’iisal wasaaraha u magacaabin beeshooda, ayna doonayaan inay ka xoreeyaan cadaadis uga yimaada beesha Muddulood, taasoo keentay in musharixiin kasoo jeeda beeshaasi ay ka caroodaan.